बामदेवको कारण नेकपाभित्र यति ठूलो पहिरो, उ'ड्यो सबैको होश ! - Prateek Nepal
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष बामदेव गौतम पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भए । तर त्यसअघि २०७० सालको निर्वाचनमा गौतम प्युठान र बर्दिया दुवै क्षेत्रबाट जितेका थिए ।
२०७० सालमा प्युठानमा जितेको भएपनि अर्काे निर्वाचनमा बामदेवले प्युठान छाड्नु धेरै महंगो पर्‍यो । उनको प्रधानमन्त्री हुने सपना नै पूरा हुन सकेन । बामदेवले छाडेको प्युठान जिल्लामा नेकपालाई नै अ’प्ठ्यारो परिरहेको छ ।
माओवादीहरूको येस्तो ठूलो बि’जोग, प्रचण्ड ‘ग’द्दार’ घो’षित
Breaking…जुवा अखडामा प्रहरीको छापा, मिटरब्याजी नाइकेसहित ७ प’क्राउ !
November 17, 2020 November 17, 2020 Ramash kunwar
यही हो नेपाली चेली भारतको कोठीमा बे’च्ने दा’नवरुपी टाउटाउ तामाङ !